Ummeli e-Eindhoven | Law & More - I-advocatenkantoor e-Eindhoven
Ngabe ungusomabhizinisi noma umuntu ozimele obhekene nenkinga yezomthetho futhi ungathanda ukuthi ixazululwe? Sicela uxhumane Law & More, abameli bethu bayakujabulela ukukusiza! Ngo- Law & More Siyaqonda ukuthi, noma ngabe ungusomabhizinisi noma ungumuntu ozimele, zonke izindaba zomthetho ziningi kakhulu nokuthi noma yiluphi udaba lwezomthetho lungaba nomthelela omkhulu empilweni yakho. Ngakho-ke, ngokungafani namafemu amaningi abameli, Law & More ikunikeza okunye okungeziwe. Lapho amafemu amaningi omthetho enolwazi kuphela ngendawo echaziwe yomthetho wethu futhi enza imisebenzi, Law & More ikunikeza insizakalo esheshayo nendlela yomuntu siqu yokwengeza kulwazi olubanzi noluchaziwe lwezomthetho.
NGABE UDINGA UMMELI EMPAKATHI?
Ngabe ungusomabhizinisi noma umuntu ozimele obhekene nenkinga yezomthetho futhi ungathanda ukuthi ixazululwe? Sicela uxhumane Law & More, abameli bethu bayakujabulela ukukusiza! Ngo- Law & More Siyaqonda ukuthi, noma ngabe ungusomabhizinisi noma ungumuntu ozimele, zonke izindaba zomthetho ziningi kakhulu nokuthi noma yiluphi udaba lwezomthetho lungaba nomthelela omkhulu empilweni yakho. Ngakho-ke, ngokungafani namafemu amaningi abameli, Law & More ikunikeza okunye okungeziwe.
> Inkampani yezomthetho e-Eindhoven
Lapho amafemu amaningi omthetho enolwazi kuphela ngendawo echaziwe yomthetho wethu futhi enza imisebenzi, Law & More ikunikeza ngensizakalo esheshayo kanye nendlela yomuntu siqu ngaphezu kwalolo lwazi olubanzi nolucacile lwezomthetho. Isibonelo, abameli bethu bangongoti emkhakheni wezomthetho womndeni, umthetho wezabasebenzi, umthetho wezinkampani, umthetho wempahla yokusungula nokuhambisana. Futhi uma kukhulunywa ngezinkampani, Law & More zenzelwa osomabhizinisi abasemagatsheni ahlukahlukene, njengezimboni, ezokuthutha, ezolimo, ezempilo kanye nezokuhweba. Ngabe ufuna enye indawo yomthetho? Ngemuva kwalokho sicela ubheke ikhasi lethu lobuchwepheshe lapho zonke izindawo zethu zomthetho zibhalwe khona.
Ubuchwepheshe be Law & More e-Eindhoven
Akunandaba noma uhlobo lwendaba esemthethweni, yethu Law & More abameli bayakwazi ukukuqondisa futhi bakusize kusukela ekuqaleni kuze kube sekupheleni kwanoma iyiphi inqubo yezomthetho, besekela umsebenzi wabo isu elicabangelwe kahle, nelithuthukile. Inkampani yethu yezomthetho futhi ihlinzeka ngokuxazululwa kwezingxabano zomthetho nezinsizakalo zamacala kuzo zombili izinkampani nabantu abazimele futhi yenza ukuhlolwa okulinganiselayo kwamathuba nezingozi ngaphambi kwazo zonke izinqubo zomthetho. Futhi uma kukhulunywa ngenqubo yezomthetho, abameli bethu abavela e-Eindhoven bazokulwela. Ngemuva kwakho konke, sikholwa wukuthi wonke umuntu kufanele athole ithuba lokuzimela ngamalungelo akhe. Kungakho futhi silwela ukuthola isilinganiso samanani entengo esingcono kakhulu samakhasimende ethu, ngakho-ke ungaqiniseka ukuthi utshalomali lwakho luzozikhokhela. Noma kunjalo, Law & More ayinikezi izinsizakalo zomthetho kuphela njengomeluleki nomeluleki wamacala kodwa futhi iyatholakala kuwe njengomlingani ohlukanisayo.
Inkampani yezomthetho e-Eindhoven
Ngaphezu kwalokho, ngaphezu kolwazi lwethu olubanzi lomthetho wamaDashi (wenqubo), sinolwazi oluningi lwamazwe omhlaba. Ihhovisi lethu aligcini emazweni aphesheya kuphela ngokuya ngobubanzi kanye nohlobo lwezinsizakalo zalo, kodwa futhi nangokobubanzi bamakhasimende asethuthukile nasekhaya. Ukuze sinikeze amaklayenti ethu insizakalo engcono kakhulu, sineqembu elizinikele labameli bezilimi eziningi kanye nezomthetho, abalwazi kahle ulimi lwesiRussia, phakathi kwezinye izinto. Ngakho-ke, noma ngabe ungumfokazi inkampani yangaphandle noma ungumuntu wangasese noma ngabe ubhekene nenkinga yezomthetho maqondana nozakwethu wangaphandle, Law & More abameli bakhona ngawe! Ngabe ufuna ukwazi indlela yethu yokusebenza nokuthi yini esingakwenzela yona? Ngemuva kwalokho sicela uxhumane nathi.
Ngakho-ke, ufuna ulwazi lwehhovisi elikhulu lebhizinisi? Kepha usathanda ukuthintana nomuntu, njengehhovisi elincane lokuphumula? Ngemuva kwalokho Law & More yinkampani yabameli bakwa-Eindhoven. Law & More yinkampani yezomthetho enamandla, ehlukahlukene, eseScience Park e-Eindhoven, ebizwa nangokuthi iSilicon Valley yaseNetherlands esebenza ezinhlobonhlobo zamakhasimende endawo nawamazwe omhlaba, izinkampani, izikhungo nabantu ngabanye. Abameli bethu e-Eindhoven bakunikeza insizakalo eningi kunamanye amahhovisi. Isibonelo, ihhovisi lethu lase-Eindhoven linamahora amaningi okuvula kanti futhi sisebenza futhi kusihlwa nangezimpelasonto (Mon / Fri 8.00 - 22.00, Sat / So 9.00 - 17.00). Ngaphezu kwalokho, sijwayele ukusebenza ngokushesha okukhulu, ngakho-ke akudingeki ulinde isikhathi eside ukuthi siphendule imeyili yakho noma ngaphambi kokuba ube nomunye wabasebenzi bethu ocingweni.